Ny fiasan'ny electrocardiogram sy ny tosidrà ao amin'ny Galax Watch 3 sy Active 2 dia ho tonga any Espana amin'ny faran'ny volana febroary | Androidsis
Rehefa nandeha ny taona dia lasa fitaovana ny smartwatches izay tsy mandefa fampandrenesana fotsiny na mamela antsika hamaly antso, satria izy ireo koa dia mandrefy ny fitepon'ny fony, manara-maso ny torimasontsika ary koa mandrefy ny tosi-dra ary manao electrocardiogram function.
Ny sasany amin'ireny fiasa ireny, toy ny fandrefesana ny tosidrà sy ny electrocardiogram, dia mitaky fanamarinana isaky ny firenena (any Espana dia ampy ny fanamarinana eropeana). Araka ny voalazan'i Samsung, tamin'ny Desambra 2020 dia nahatanteraka izany fanamarinana izany, izay mamela azy hanitatra io fampiasa io any amin'ny firenena eropeana 28.
Ity fampiasa vaovao ity dia ho tonga amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fampiharana Samsung Health Monitor, fanavaozana voalahatra ny 22 febroary. Araka ny voalazan'i TaeJong Jay Yang, filoha lefitra mpanatanteraky ny orinasa ary lehiben'ny ekipan'ny fahasalamana ao Samsung:
Manodidina ny iray tapitrisa ny olona nampiasa ny app Samsung Health Monitor mba hikarakarana ny fahasalamany hatramin'ny nanombohany tany Korea tamin'ny volana Jona tamin'ny taon-dasa.
Manolo-tena izahay mba hahafahan'ny olona maro eran'izao tontolo izao mankafy ity serivisy vaovao ity, ary ity fanitarana ity dia maneho dingana lehibe indrindra amin'ny iraka ataontsika.
1 Fandrefesana ny tosidra
2 Fanaraha-maso electrocardiogram
Fandrefesana ny tosidra
Ny fiakaran'ny tosi-drà dia misy ifandraisany amin'ny aretin'ny voa, ny fo sy ny ati-doha, raha tsy voatsabo ara-potoana dia mety hiteraka aretim-po na lalan-dra izany.
Ny fibrillation atrial dia ny antony mahatonga ny fahasarotana amin'ny fo toy ny tsy fahombiazan'ny fo, tapaka lalan-dra, ny embolisma, ny lalan-dra. Tombanana ho manodidina ny 33 tapitrisa ny olona eran'izao tontolo izao no tratry ny fibrillation atrial tsy tapaka.
Ity fampiasa vaovao ity dia tsy ho hita ao amin'ny Galaxy Watch sy Galaxy Active 2 fotsiny amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny Samsung manomboka ny 22 febroary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny fiasan'ny electrocardiogram sy ny tosidrà ao amin'ny Galax Watch 3 sy Active 2 dia ho tonga any Espana amin'ny faran'ny volana febroary
New Motorola Moto Edge S: mamoaka ny Snapdragon 870 ary manana bateria 5000 mAh